Su'aalaha La Weydiiyo | ANHUI TANGRUI AQOONSIGA FARSAMADA CO., LTD
1. Waa maxay goobtaada dalabka ugu weyni? Gaadiidka wax laga badalay ama kuwa shacabka?
Nidaamyada isteerinka iyo ka hakinta gawaarida wax laga badalay iyo kuwa rayidka
2. Shahaadooyin kasta ama shahaado? Iyo qalabka ugu muhiimsan iyo qalabka baaritaanka?
Shahaadada: IATF16949 Qalabka Imtixaanka: trilinear iskuduwaha qalabka cabbiraadda, X-RAY, GENERTATORS, qalabka baarista metallographic, spectrograph iyo iwm. In ka badan 20 nooc oo noocyo kala duwan ah ayaa noqon kara R&D bishiiba.
3.Waa maxay habka lacag bixintaadu?
TT, usd / euro, taariikhda amaahda waa la taageeri karaa 6 bilood ka dib iskaashi
4. Waa maxay habka caadiga ah ee wax lagu duubo? Avaliable in loo habeeyo?
Ctn alwaax, gudaha boorsada opp, dibedda santuuqa., OEM & ODM waa la soo saari karaa.
1. Waa maxay siyaasadaada dammaanad qaade?
Tangrui waxay bixisaa damaanad-hoggaamineed warshadeed oo ku saabsan dhammaan alaabooyinka oo ay ku jiraan Dammaanadda Beddelashada Nolol ee nidaamyo badan oo istiraatiijiyadeed iyo qaybo ka-joojinta-sii-deynta ah.
2. Maxay tahay siyaasadaada soo noqoshada?
Siyaasadda soo noqoshada Tangrui waa laga daawan karaa halkan. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid fadlan naga soo wac lambarka 0086-553-2590369
1. Maxaad ugu iibsaneysaa Alaabada Tangrui Alaabtaada ugu muhiimsan? Waa kuwee suuqyada waaweyn iyo macaamiisha aad u adeegto?
Tangrui wuxuu ku takhasusay nidaamka isteerinka iyo ganaax ka badan 20 sano, waxaan u adeegnay Toyota, Honda, Kia, Nissan, Ford, Buick, Chevrolet, Renault, Geely, Chery, BYD iyo iwm Wax soosaarka ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa isteerinka isteerinka, gacanta xakamaynta, naxdinta , wadajirka kubbadda, xarunta giraangirta.
Suuqa ugu weyn: Waqooyiga Ameerika
2. Waa maxay Moq ee alaabtaada cusub?
300 nooc, haddii shey wax lagu keydsanayo, aan xadidnayn.
3. Sidee loo iibgeeyaa sheygaaga keydka ah?
Toos ugu dir amarkaaga.
1. Sidee amarkeyga loogu diraa (yaa)?
Amaradayaga waxaa soo diraya wakiilkaaga laguu magacaabay, amarradaada waxaa loo diri doonaa sida aad u codsatay.
2. Sideen ula socon karaa amarkayga?
Waxaad kala socon kartaa amarkaaga maamulaha koontadayada, la socoshada macluumaadka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa.
3. Sideen ku ogaan karaa in amarradayda (amarradayda) la diray?
Markii amarkaaga la raro waxaad heli doontaa emayl xaqiijin shixnad ah, oo loo diro emai aad soo gashay markii aad dalbanaysay amarkaaga.Waxa kale oo aad ku arki kartaa taalada taal qabaalkeenna aoocunt.
4. Muddo intee le'eg ayuu amarkaygu ku qaadanayaa inuu ii yimaado?
mudada furan ee caaryada, khidmadaha wax lagu nadiifiyo iyo iwm Muddo cusub oo caarya ah oo furan 40-60 maalmood, waqti waxsoosaar ballaaran 35-45 maalmood, waqtiga rarka 30-45 maalmood.
1. Sidee loo noqdaa wakiilkaaga gaarka ah?
Wadashaqeyn dheeraad ah 6dii bilood, qeybiyeyaasha xirfadleyda ah ama kuwa ku iibiya qaybaha baabuurta suuqa xaafaddaada.
Jabinta Steering Front, Gawaarida Hub, Naxdinta Rubber Rubber, Hood Shooga Nuugista, Wadajirka Kubadda Tire, Naxdinta Nuugista Bolt,